विश्वकै जेठा कम्युनिस्ट का. खगुलाल गुरुङ – Nepal Japan
नेपाली समय : 01:14:25
जापानी समय : 04:29:25
विश्वकै जेठा कम्युनिस्ट का. खगुलाल गुरुङ
11 July, 2019 15:54 | बिचार | comments | 47700 Views
का. खगुलाल गुरुङ शताब्दी कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँ १०१ वर्ष पुगेर १०२ वर्षमा लाग्नु भयो । त्यसरी उहाँ नेपालको सबैभन्दा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मात्र नभएर शायद संसारको नै उहाँ सबैभन्दा ज्येष्ठ कम्युिनस्ट हुनुहुन्छ ।
‘शायद’ यस कारणले विश्वमा अरू पनि कोही त्यति उमेरको कुनै कम्युनिस्ट भएको कुरा मलाई थाहा छैन र त्यो कुरा मैले निश्चित रूपले भन्न सक्दिनँ, त्यसैले ‘शायद’ शब्द जोडेको छु । उहाँ २०१० सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल हुनु भएको थियो । त्यसरी उहाँ गत करिब ६५ वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न हुनु हुन्छ, यद्यपि गत करिब एकाध दशकदेखि बृद्ध अवस्था, शारीरिक अशक्तता र रोग समेतका कारणले उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय हुन सक्नु भएको छैन । तर, पार्टी र क्रान्तिप्रतिको उहाँको आस्था अविचलित छ र अहिले पनि अविचलित छ । उहाँले कान राम्रोसँग सुन्नु हुन्न । तर, आँखाले राम्ररी देख्नु हुन्छ र पत्रपत्रिका आदि बिना चस्मा पढ्न सक्नु हुन्छ । उहाँले पार्टीका पत्रपत्रिका वा प्रकाशनहरू अहिले पनि खोजी खोजी पढ्नु हुन्छ ।
पञ्चायती कालमा उहाँले चुनावमा भाग लिनु भएको थियो र उहाँ त्यो गाउँ पञ्चायतको प्रधान पनि बन्नु भएको थियो । पञ्चायतमा सामेल भएका धेरै कम्युनिस्ट त्यसैमा बिलाए वा त्यसमा सामेल भएर नै आफ्नो भाग्य बनाउने प्रयत्न गरेका थिए । तर, का. खगुलालले पञ्चायत वा चुनावलाई पनि वर्गसङ्घर्षकै रूपमा लिनु भएको थियो । त्यसैले आफ्नो कार्यकालमा उहाँको गाउँका सामन्त वा जालीफटाहासित कडा सङ्घर्षको वा वर्गसङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । पहिले शिविरको समयमा उहाँले जुन किसान आन्दोलनको सञ्चालन गर्नु भएको थियो, आफू प्रधानपञ्च भएको बेलामा पनि त्यो किसान सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गर्नु भएको थियो । त्यसैको परिणाम थियो कि जसरी पञ्चायतमा सामेल भएका धेरै कम्युनिस्ट त्यसैमा बगेर बिलाए, त्यसरी का. खगुलाल गुरुङ बिलाउनु भएन र त्यसपछि पनि उहाँले लगातार कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा वा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिहनु भयो । पार्टीको सम्पूर्ण इतिहास र स्वयं प्युठानको गत ६५ वर्षको इतिहासले पनि बताउँछ– धेरै मानिस कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर छिट्टै हराएर गए । त्यसरी हराएर जानेमध्ये कैयौँजना आफ्नो समयमा धेरै नै सक्रिय, लडाकु वा क्रान्तिकारी पनि थिए । तर, तिनीहरूको त्यसप्रकारको क्रान्तिकारिता विभिन्न प्रकारका अवसरवाद, पलायन वा गद्दारीसम्ममा परिणत हुँदै गए ।
शायद यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नै एउटा गम्भीर समस्या हो । लेनिनले भने झैँ एउटा क्रान्तिकारीको सबैभन्दा मुख्य विशेषता निरन्तरता नै हो । त्यो कसीमा का. खगुलाल पुरै खरो उत्रनु भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेदेखि अहिलेसम्मको उहाँको भूमिकाबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यो उहाँले हामी सबैका अगाडि स्थापित गरेको आदर्श हो र प्रत्येक कम्युनिस्टले त्यो आदर्शबाट शिक्षा लिने र त्यसअनुसार आफूलाई ढाल्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यो प्रयत्नमा कोही कति सफल हुन्छ ? त्यो कुराले नै कोही कहाँसम्म सच्चा कम्युनिस्ट हो वा होइन ? त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जानेछ । तर, समस्या के छ भने त्यो परीक्षा सजिलो छैन । जीवनको अन्त्यमा नै त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । शायद त्यसका लागि कुनै कम्युनिस्ट परीक्षाको लामो सिलसिलाबाट जानु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ।